R/W:Kheyre oo DALAB fulintiisa adag tahay hordhigay WasiiradiisaXOG!!
Waxaa asbuucii ugu dambeeyey Magaalada Muqdisho ka socday kulamo xasaasi ah oo u dhaxeeyey Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo golahiisa wasiirada iyadoo laga wada hadlayey sidii ay uga qeyb noqon lahaayen bad baadinta Xukumadda maadama cada
Waxaa asbuucii ugu dambeeyey Magaalada Muqdisho ka socday kulamo xasaasi ah oo u dhaxeeyey Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo golahiisa wasiirada iyadoo laga wada hadlayey sidii ay uga qeyb noqon lahaayen bad baadinta Xukumadda maadama cadaadis xooggan aay kala kulmayaan Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Sida ilo wareedyo Muhiima aan ku heleeyno Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, ayaa Wasiir walba hordhigay dalab ah in uu keeno laba ama sedax Xildhibaan oo kamid ah Golaha Shacabka, taagersana Siyaasadiisa diyaarna u ah difaaca Xukumadda.
Wasiirada Xukumadda Kheyre oo inta badan aay ku adag tahay in aay keenan tiro Xildhibaano ah oo diyaar u ah difaacida Xukumadda Kheyre ayaa kulamo kala duwan Muqdisho kula qaadanaya Xildhibaanada ku heybta ah iyaga u balan qaadaya in aay hadii aay taageran dhaqaalo siin doonaan oo aay ula tagaan R/wasaare Kheyre si aay xilkooda u bad baadsadaan.
Wasiirada dalabka fulintiisa adag tahay la hordhigay, ayaa badankood kamid aheyn Xildhibaanada Golaha Shacabka waxaana laga yaaba in meesha looga saaro isku shaandheyn laguna badalo Xildhibaano difaaci kara Xukumadda.
Mareykanka oo shuruud adag ku xiray Suudaan
Xog: Al-Shabab oo amar adag dul dhigtay maamulka hotel ay deganaayeen xildhibaano iyo madax kale
Madaxweynaha Puntland Oo Khudbad Adag Jeediyay!!
Axmed Madoobe "Soomaaliya Waxaa ay u baahan tahay Bad-baado Maanta
Turkiga oo xir xiray soo galooti ay Soomaali ka mid tahay
Shariif Xasan oo Amaro Adag Dul Dhigay Hay'adaha Amniga